Sida Loo Noqdo Dillaal Amaah Ganacsi 2021 | Tusaha Khabiirka -
Bogga ugu weyn Sida Loo Noqdo Dillaal Amaah Ganacsi 2021 | Tusaha Khubarada
Sida Loo Noqdo Dillaal Amaah Ganacsi 2021 | Tusaha Khubarada
Isha sawirka: Pixabay.com
Haddii aad ka mid tahay dadka u hanqal taagaya inay noqdaan dillaaliinta amaahda ganacsiga, markaa maqaalkani adiga ayuu kuu yahay. Dillaalka amaahda ganacsigu wuxuu la mid yahay noocyada kale ee dilaaliinta ah ee la heli karo. Sida dillaalka guryaha oo kale ah ayaa kugu xiraya maalgashiyada hantida ma guurtada ah ee qiimaha leh, dillaaliyeyaasha amaahda ganacsigu waxay kugu xirayaan xulashooyinka maalgelinta ganacsiga ee kala duwan sida amaahda qalabka ganacsiga, amaahda faa'iidada leh, iyo amaahda SBA.
Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee dilaaliinta ganacsigu ku jiraan ganacsiga ayaa ah inay ka caawiyaan ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yarba si ay u helaan ikhtiyaarada amaahda ugu fiican iyo shirkadaha sida aadka ah u doorbidaya ganacsigooda.
Dillaaliyeyaasha amaahda ganacsigu waxay baaraan meheradaha macmiilkooda si ay u fahmaan qaab dhismeedka amaahda ugu fiican iyaga. waxay kaloo diyaariyaan oo codsadaan shirkadaha amaahda iyagoo ka wakiil ah shirkadaha macmiilka.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu guuleysto sida dillaal deyn waa in si cad loo fahmo noocyada kala duwan ee amaahda la heli karo. Dillaaliyeyaasha amaahda ganacsiga ee guuleysta waxay leeyihiin shabakad ballaaran oo shirkado hoggaamineed ah. Waxay kaloo leeyihiin fahan cad oo ku saabsan badeecooyin amaah oo kala duwan oo la heli karo sida amaahda dhaqanka iyo ururrada deynta.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo noqdo dillaal amaah ganacsi, sii wad akhrinta maqaalka ilaa dhammaadka.
Waa kuma Dillaal Amaah Ganacsi?
Dillaalka amaahda ganacsigu waa mid leh waxbarasho sax ah iyo xirfad loo dejiyay si loo diyaariyo loona sugo amaahda ama maalgelinta shirkadaha. Dillaaliyeyaasha amaahda ganacsiga qaarkood waxay si toos ah ula shaqeeyaan amaahiye gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, inta badan dillaaliyeyaasha amaahda ganacsigu waxay leeyihiin amaahiyayaal kala duwan oo ay la shaqeeyaan si ay ugu helaan heshiisyada ugu wanaagsan macaamiishooda.
Dillaaliyeyaasha amaahda ganacsigu sida caadiga ah waxay helaan boqolkiiba deynta ay ku aaminaan lacag -bixintooda, taas oo ah abaalmarin wanaagsan waqtigooda iyo dadaalkooda.
Faa'iidooyinka Noqoshada Dilaal Amaah Ganacsi?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee noqoshada dillaal amaah ganacsi waa fursadda koritaanka ee la socota.
Si ka duwan xirfadaha kale ee ku bilaaba shaqaalahooda saacad yar, ma jirto dabool aad ku kasban karto dillaal ganacsi sannad gudaheed. iyadoo ku xiran hadba sida aad u wanaagsan tahay iyo sida aad u jeceshahay xirfadda, kasbashada lix lambar oo lambar ah sanadkiiba aad ayay suurtogal u tahay. Dillaaliinta amaahda ganacsi ee xirfadleyda ah waa madaxdooda.
Waxay u arkaan inay u fududahay inay dheelitiriyaan shaqadooda iyo nolosha bulshada. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad noqoto dillaal ganacsi, waxaad qaadatay go'aan xigmad leh.
Way fududahay in la barto sida loo noqdo dillaal amaah ganacsi. Waxa kaliya oo ay qaadataa waa rabitaanka iyo xiisaha shaqada.
Uma baahnid maalgelin weyn oo raasumaal ah ama shahaadada maalgelinta ganacsiga ama sannado badan oo khibrad gacmeed ah. In kasta oo laga yaabo inay kor u qaadaan xirfaddaada, haddana maahan shuruudaha aasaasiga ah ee shaqada.
Waa Maxay Shuruudaha Loogu Talagalay Dillaaliyeyaasha Amaahda Ganacsiga?
Inaad noqoto dillaal amaah ganacsi waa wax qof walba samayn karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in la fahmo inay jiraan xirfado aasaasi ah oo aad u baahan tahay si aad u hesho haddii aad rabto inaad ku guulaysato oo aad ku fiicnaato shaqada.
#1. Hesho Asalka Waxbarashada
Ma jiro shahaado jaamacadeed oo gaar ah oo looga baahan yahay kuwa doonaya inay noqdaan dillaaliinta amaahda ganacsiga yar yar. Waxaa jira tiro badan oo dillaaliin ah oo ku bilaabay dibloomada dugsiga sare halka kuwa kalena ay ku bilaabeen GED.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad qorsheyneyso inaad gasho aagga amaahda ganacsiga ama deyn-bixinta, shahaadada bachelor-ka ee dhinacyada la xiriira maaliyadda sida dhaqaalaha, iyo ganacsigu waa lama huraan.
Shahaadada cilmu -nafsiga ama isgaarsiinta ayaa sidoo kale noqon karta bar bilow u ah kobaca xirfaddaada.
#2. Baro Xirfadda Jilicsan
In kasta oo lahaanshaha waxbarasho ee maaliyadeed ay tahay mid lama huraan ah, helitaanka “xirfadaha jilicsan” ee meelaha gaarka ah ayaa sidoo kale lama huraan ah. Dillaalka amaahda meheraddu waxay ku lug leedahay la macaamilka noocyada kala duwan ee dadka ka soo kala jeeda dhaqamo kala duwan maalin kasta.
Sidaa darteed, helitaanka xirfadaha xiriirka dadka waa mid aad loogu taliyo. Xiriirka xirfadeed iyo kalsoonida ayaa shardi u ah guusha warshadaha.
Waxa kale oo lama huraan u ah dillaaliyeyaasha amaahdu inay awoodaan inay fahmaan meheradaha leh baahi dhaqaale. Ka sokow fahamka baahidooda dhaqaale waa ogaanshaha nooca amaahda ugu habboon iyaga si ay u gaaraan yoolkooda.
Mid ka mid ah qodobbada kobciya kalsoonida macmiilka ayaa ah kartida lagu gaari karo go'aanno maaliyadeed oo degdeg ah oo sax ah.
Waxaa kale oo lama huraan ah in la helo aqoon sare oo maaliyadeed oo sarre u ah amaahda amaahda ganacsiga.
#3. Ku Khibrad Fiiriya Dhulka La Xiriira
Dadka waayo -aragnimada u leh bangiyada, iibinta, amaahda, iyo adeegyada macmiilka ayaa u sahla inay sugaan shaqo sidii dillaal amaah ganacsi.
Si aad u dhisto dakhli aad u faahfaahsan oo aad lahaato gees ahaan sida dillaal amaah ganacsi, waxaad ka dalban kartaa fursad shaqo barasho shirkad dilaal oo dhisan ama bangi.
Loo-shaqeeyayaal badan ayaa siiya khibrad tababar gacmeed shaqaalahooda. Xaaladaha badankood, waaya -aragnimadani waxay la timaadaa shaqooyin madaxbannaan oo ka caawiya shaqaalaha inuu sii horumariyo xiriirkooda dhexdooda iyo xirfadaha maareynta macmiilka.
Sidoo kale waa waddo lagu helo waayo-aragnimo dhab ah oo ku saabsan sida loo qiimeeyo loona qiimeeyo bayaannada maaliyadeed iyo codsiyada amaahda.
#4. Ka Qaybgal Tababarka Dillaaliyeyaasha Maaliyadda Ganacsiga
Waxaa lama huraan u ah amaahda maaliyadeed ee ganacsi si aad uga qeyb gasho tababarka si aad u hesho xirfadaha isku -xirnaanta aasaasiga ah iyo falanqaynta xisaabta.
Ku shaqaynta sida layli ahaan waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo tababarkan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale ka heli kartaa tababarkan onlayn.
Ka -qaybgalka tababarka dilaaliinta ganacsiga waa hal dariiqo oo aad ku heli karto xirfadaha aasaasiga ah iyo aqoonta aad u baahan tahay si aad ugu shaqayso shirkad dillaal oo wax -ku -ool ah.
Ma u baahan tahay Ruqsad si aad u noqoto Dillaal Amaah Ganacsi?
Gobolo badan uma baahna dillaaliinta amaahda si ay u helaan ruqsad gaar ah oo ay ku shaqeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, shuruudaha hawlgalku way ku kala duwanaan karaan gobol ilaa gobol.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la sameeyo baaritaanka asalka ah haddii shuruudaha looga shaqeynayo sidii dillaal ahaan gobolkaaga ka hor intaadan duurka gelin.
Waxaad weydiin kartaa guddiga shatiyeynta gobolkaaga ama laanta maamulka ganacsiga maxalliga ah si aad u ogaato haddii aad u baahan tahay liisan si aad ugu shaqeyso dillaal amaah.
Tilmaan-Tallaabo-Tilmaan-si aad u Noqoto Dillaal Amaah Ganacsi
Bilaabidda safarkaaga sida dillaal amaah ganacsi ah way adkaan kartaa haddii aan la helin hagitaan habboon. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo noqdo dillaal amaah ganacsi, shanta tallaabo ee soo socda ayaa ku hagaya.
Tallaabada Koowaad: Raadso Tababarka Dillaalnimada Ganacsiga ee habboon
Si aad ugu guuleysato dillaal amaah ganacsi, inaad yeelato tababar sax ah waa lama huraan. Waxaad ka heli kartaa tababarka onlaynka ah ama gacan-ku-haynta shirkadaha dillaalka ee la aasaasay.
Iyada oo ku xidhan nooca tababarka, waxay qaadan kartaa muddo toddobaad ah ama dhawr toddobaad ah si loo helo tababar qoto dheer.
Goobaha kale waxay siiyaan tababar dabacsan dadka leh jadwalka mashquulka ah. Qiimaha tababarka sida dillaalka amaahda ganacsigu caadi ahaan wuxuu ka bilaabmaa dhowr kun oo doolar. Kharashku wuu kala duwanaan karaa ama kordhin karaa iyadoo ku xiran heerka iyo nooca tababarka.
Tababarka sida dillaalka amaahda ganacsigu ma aha mid raqiis ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad hubiso inaad si fiican u samayso cilmi -baaristaada ka hor intaadan saxiixin barnaamij gaar ah. Baadh barnaamijyada kala duwan ee jira iyo manhajka koorsadooda si aad u ogaato ku habboonaantaada kahor intaadan is -qorin barnaamijka.
Qaar ka mid ah shuruudaha aasaasiga ah ee la tixgelinayo marka la dooranayo barnaamijka tababarka ayaa ah sida wanaagsan ee ay u daboolaan xirfadaha falanqaynta, isku xirnaanta, iyo xisaabta. Haddii gobolkaagu u baahan yahay ruqsad siinta dillaaliinta amaahda ganacsiga, hubso in barnaamijyada koorsadu ay buuxiyaan shuruudaha guddiga shatiyeynta gobolkaaga.
Barnaamijyada koorsooyinka bixiya shahaadooyinka dhammaadka barnaamijka waxay kordhin doonaan fursadahaaga inaad ku soo degto shaqo sida dillaal deyn ganacsi.
Kuwa doonaya inay galaan dhaqamada gaarka ah, shahaadadu waxay siisaa nooc ka mid ah faa'iidada warshadaha.
Tallaabada labaad: Qaado Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha (EIN)
Haddii aad shaqaale leedahay iyo haddii kaleba, codsashada lambarka aqoonsiga loo -shaqeeyaha ayaa ku caawin kara. Mid ka mid ah sababaha tan ayaa ah inay kaa caawin karto helitaanka akoonnada bangiga iyo fududeynta codsiyada shatiyada ganacsiga.
Codsiga EIN waxaa lagu samayn karaa onlayn iyada oo loo sii marayo Website -ka Adeegga Dakhliga Gudaha. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codsiyada EIN, booqo websaydka IRS.
StepThree: Furo Koonto Bangiga Ganacsiga oo Codso Shatiga Ganacsiga ee maxalliga ah
Kuwa doonaya inay ku dhaqmaan dhaqamada gaarka ah, waxaa lagama maarmaan ah inay codsadaan ruqsadda ganacsiga maxalliga ah. Arjiga ayaa laga yaabaa inuu soo jiito khidmadaha qaarkood waxaana laga yaabaa inuu u baahdo EIN -kaaga inuu yahay halbeegga diiwaangelinta.
Markaad si guul leh u codsato oo aad hesho liisankaaga ganacsiga, tallaabada xigta waa inaad furato koonto ganacsi. Furitaanka koonto ganacsi waxay u baahan tahay inaad raacdo EIN -kaaga iyo shatiga ganacsiga. marka aad furato xisaab ganacsi, codso jeeg.
Ku bixinta lacagahaaga jeeg waxay kaa caawin kartaa inaad ula socoto lacagahaaga si habsami leh.
Tallaabada Afraad: Iskaashi la leh Shirkadaha Amaahda Sumcad leh
Si aad ugu guulaysato dillaal amaah ganacsi, awooddaada aad ku sugayso amaahda oo aad ku xalliso baahiyaha maaliyadeed ee macaamiisha ayaa muhiim ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in lala kaashado shirkadaha amaahda bixiya ee sumcad leh.
Saddex shirkadood oo wax amaahiya ayaa bilow fiican ah. Waxaad kor u qaadi kartaa tirooyinka marka waqtigu sii socdo. Macaamiisha badiyaa waxay jecel yihiin inay arkaan ikhtiyaarro kala duwan ka hor inta aysan qaadan go'aankooda u dambeeya.
Shirkadaha deynta ee kala duwan waxay leeyihiin shuruudo oggolaansho deyn oo kala duwan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo shuruudaha kala duwan ee shirkadaha amaahda ee kala duwan. Ha ku degdegin inaad gasho wada -xaajoodyada komishanka, iyo lacag -bixinnada kuu dhiman ee gudbinta.
StepFive: Raadi siyaabo aad ku suuqgeyso meheraddaada oo aad u hesho Macaamiisha mustaqbalka
Markaad diiwaangeliso meheraddaada oo aad abuurto koontadaada, tallaabada xigta waa inaad ka hesho Macaamiisha Soo -ifbaxa suuq -geynta. Si aad u hesho caymis ballaaran, waxaad u adeegsan kartaa xeeladaha suuq -geynta intarneedka iyo offline -ka.
Calaamadeynta waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo lagu suuqgeeyo ganacsigaaga. la wadaag waraaqaha ganacsiga, kaararka wicitaanka, buug -yaraha, iyo qalabka kale ee xayaysiinta.
Abuur degel degel oo ka faa'iideyso tayada iyo ka -qeybgalka si aad u hesho macaamiisha mustaqbalka. Xaqiiji in farriinta ku jirta mareegahaaga ay tahay mid cad oo muujineysa waxaad samayso adigoon indhaha ka saarin macaamiisha iman karta.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato adeegyada qoraa ku jira maadada xirfadda leh, soo -saaraha webka, iyo naqshadeeyaha naqshadeynta si ay kaaga caawiyaan inaad soo saarto degel firfircoon oo ganacsigaaga ah.
Waxaad ku lug yeelan kartaa ganacsiyada yaryar hal-hal. Waa hab wanaagsan oo lagu dhisi karo xiriirro laguna kobcin karo kalsoonida macmiilkaaga ku yeelan kara ganacsigaaga.
Tababbarka saxda ah marka lagu daro xiisaha iyo xirfadda saxda ah waa waxa kaliya ee loo baahan yahay si aad u noqoto dillaal amaah ganacsi oo guuleysta. Faa'iidooyinku way badan yihiin oo suurtogalnimadaada inaad ku korto waa mid aan xad lahayn.
Dillaal ahaan, adiga ayaa go'aaminaya waxa adiga kuu fiican, ama inaad u shaqeyso sidii koox ahaan ama shaqsi ahaan. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad la shuraakowdo dad leh hadaf isku mid ah.
Xirfad ahaan dillaal amaah ganacsi waa mid aad u xiiso badan. Waxay ku habboon tahay kuwa doonaya inay sahamiyaan warshadaha maaliyadeed iyagoo aan haysan dhaqaalihii si ay u sii wataan aqoonta waxbarasho ee bangiyada iyo maaliyadda.
Sidoo kale, beertu uma baahna maalgelin raasumaal oo waaweyn, gaar ahaan haddii aad hadda uun bilaabanayso. Sannado badan oo waayo-aragnimo ah ayaa sidoo kale aan ahayn shuruud dhab ah si loogu guuleysto xirfadda.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah cuntooyinka muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ku fiicnaato meheradda waxaa ka mid ah anshax ganacsi oo wanaagsan, la -taliye wanaagsan, tababar sax ah, iyo isku xirnaanta deyn -bixiyeyaasha iyo bangiyada.
Maskaxda ku hay in ay waqti qaadanayso in la dhiso isku xirnaanta saxda ah iyo kobcinta shabakadaada waxay qaadan doontaa waqti. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad samayso xoogaa dulqaad ah habka.
Ha ku degdegin si aad u aragto natiijooyin degdeg ah. Ogow in xaddiga saxda ah ee suuqgeynta, go'aaminta, iyo xamaasadda, guushu waxay qaadan kartaa waqti laakiin waa hubaal khadka.
Sida loo helo amaahda ganacsiga bilowga ah inta badan waa dhibka bilowga badan iyo ganacsiyada yaryar. Loogu talagalay…